Wednesday January 31, 2018 - 11:51:42 in Wararka
Sida aan Wararka ku helnay Xildhibaanadan ayaa u badan kuwa dhawaan saxiixay mooshin ka dhan ah Golaha Wasiirada uu Hogaamiyo Axmed Madoobe, waxaana mooshinkaasi loo gudbiyay Gudoonka Baarlamaanka maamulkaasi.
Hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa la sheegay in uu u hanjabay inta badan Xildhibaanada waday mooshinka ka dhanka ah, waxa uuna ku amray Xildhibaano badan in ay ka laabtaan Mooshinkaasi.
Xildhibaano katirsan Jubbaland ayaa cadaadis iyo cabsi galin kadib go’aansaday in ay ka laabtaan Mooshinkii ay saxiixeen, waxaana Xildhibaanadan lasoo darsay cabsi xoogan ay ka qabaanain la dhibaateeyo.
Axmed Madoobe oo maanta kulan la qaatay Xildhibaano katirsan Jubbaland gaar ahaan kuwa taageersan iyo kuwii ka laabtay Mooshinka ayaa kala hadlay xiisada siyaasadeed ee Kismaayo ka taagan iyo sidii loo dejin lahaa.
Waxa uu ka codsaday Axmed Madoobe Xildhibaanada uu la kulmay xiisada la dajiyo daacadna u noqdaan maamulkiisa, waxa ayna inta badan Xildhibaanada aqbaleen hadalka Axmed Madoobe.
Hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa intaas kadib la sheegay in taliyaasha amaanka gaar ahaan kan Nabad sugida iyo midka garoonka Kismaayo ku amray in magaalada aysan ka bixi karin Xildhibaanada Jubbaland.
Axmed Madoobe ayaa ka cabsi qaba in Xildhibaanada qaarkood hadii ay magaalada ka baxaan la hadlaan Warbaahinta ayna dhaleeceeyaan awooda uu adeegsanayo Xildhibaanada iyo siyaasiyiinta Mucaaradsan.
Xildhibaan katirsanaa Maamulka Jubbaland ayaa maalin kahor laga qaaday xasaanada kadib markii uu kasoo horjeestay Siyaasada Axmed Madoobe, waxaana xildhibaankan shalay lagu xiray magaalada Kismaayo.
Magalaada Kismaayo waxaa ka taagan xiisad siyaasadeed oo aad u kacsan, waxaana magaalada lasoo dhoobay ciidamo badan oo Nabad sugid ah kuwaa oo si weyn amaanka ku adkeenaya kana hor tagaya in kacdoono dhacaan.